Lalàna Vaovao Ao Macao Momba Ny Fiarovana an-Tserasera, Ahoana Ny Ho Fiantraikany Amin’ny Fahalalahana Maneho Hevitra? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Febroary 2018 7:27 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, русский, македонски, Português, English
Fakan-kevitra ho amin'ny famoahana ilay lalàna momba ny fiarovana an-tserasera tao Macao. Sary nahazoana alalana avy any amin'ny “All About Macao”.
Amin'izao fotoana izao, eo am-pananganana Lalàna iray momba ny fiarovana ny tontolon'ny aterineto mifototra amin'ny fakàna ny hevitry ny daholobe natao tamin'ny volana Desambra 2017 i Macao, faritra an-tanàndehibe mizaka tena any amin'ny morontsiraka atsimon'i Shina.
Nanamarika ireo mpitsikera ara-politika fa tsy dia mahaaro loatra ny fiainana manokan'ireo vahoaka ny tolo-kevitra amin'izao fotoana izao, fa manangana rafitra ara-dalàna amin'ny fanarahamaso faobe.
Amin’ny maha zanatany Portiogey azy teo aloha, nitambatra tamin’i Shina i Macao tamin’ny taona 1999, fa nitazona fizakantena avo lenta ho toy ny fari-pitantanana iray manokana (mitovy amin’i Hong Kong) miaraka amin’ny lalàm-panorenany fantatra amin’ny anarana hoe “Lalàna Fototra” nosoratana teo ambanin’ny fitsipika “Firenena Iray Rafitra Roa”.
Nanameloka ireo fihetsika mpikomy ilay Lalàna ho an’ny Fiarovam-Pirenena tao Macao tamin’ny 2009, anisan’izany ny karazana fandraisam-pitenenana sasany. An-dàlana amin’ny fandinihana ny volavolan-dàlana momba ny fiarovana ny tontolon’ny aterineto ny firenena amin’izao fotoana izao. Noheverina ho toy ny “loza mitatao” amin'ny fitonian’ny tanàna ny lisitra iray lavabe misy an’ireo mpanao politika “arahi-maso” izay nandray fitenenana ho an’ny demokrasia tao Hong Kong, ary noraràna tsy hiditra ao Macao nandritra ireo vanim-potoana sarotra, toy ireo fitsidihana nataon’ny mpitarika an’i Shina sy ny volana fampielezankevitra ho an'ny fifidianana.
Tamin’ny 11 Desambra 2017, natomboky ny governemanta tao Macao ny 45 andro fakàna ny hevitry ny daholobe tamin'ilay volavolan-dalàna momba ny fiarovana ny tontolon’ny aterineto. Nasaina mba hanome ny heviny amin’izay voasoratra ireo mpandraharaha sy ny vahoaka tsotra.
Araka ilay volavolan-dalàna, ho tomponandraikitra amin’ny fametrahana rafitra firaketana an-tsoratra ny “tena anarana” ireo mpandraharaha amin’ny fifandraisan-davitra sy ireo mpanome tolotra aterineto, anisan’izany ireo karatra SIM (Subscriber Identity Module) aloa mialoha ny sandany. Takian'izy io ihany koa ireo mpanome tolotra aterineto mba hirakitra mandritra ny herintaona farafahakeliny ny zavatra nataon’ireo mpanjifa tao amin’ny aterineto.
Araka ilay tolodalàna amin’izao fotoana izao, homen'ilay lalàna alàlana ny famoronana komity maharitra ho an’ny fiarovana ny tontolon’ny aterineto sy rafitra fampitandremana raha sendra misy olana, ary ihany koa ivontoerana iray hisahana ny hamehana hiatrehana ireo loza mitatao amin'ny fiarovana ny tontolon’ny aterineto. Hanana fahefana hanara-maso ny fifamoivoizan’ireo tahirin-kevitra ety anaty aterineto amin’ny alalan’ny rafitra ‘binary’ ilay komity, ary ihany koa hanara-maso sy hanadihady lalindalina kokoa ireo fanafihana an-tserasera amin’ny hoavy.
Manome soso-kevitra ihany koa ilay antonta-taratasy hoe tokony hametraka rafi-piarovana ireo mpandraharaha miasa amin’ireo sehatra manan-danja 11, anisan’izany ireo mpamatsy aterneto sy haino aman-jery, rano sy famatsiana herinaratra, ny rafitra ara-bola, ny tontolon’ny lalao, sy fahasalamana, sy ireo hafa, araka ny Antonta-taratasy Fakàn-kevitra (Consultation Document – CD) 4.2. Tokony ho eo ambanin’ny fanarahamason’ny departemanta mifanaraka aminy ao amin’ny governemanta sy ireo manampahefana ireo sehatra ireo. Ohatra, tompon’andraikitra amin’ny fanarahamaso ny fametrahana ireo fepetra momba ny banky sy ny rafitra ara-bola ny Manampahefana momba ny Vola ao Macao, rehefa nahazo torolalana avy amin’ny ivon-toerana misahana ny hamehana amin'ny fiarovana ny aterneto.
Homena zo ho afaka miditra any amin’ireo birao sy fotodrafitrasa misy ireo mpandraharaha momba ny aterineto (any amin’ny sehatra tsy miankina sy miankina) ireo mpiandraikitra avy ao amin’ilay ivon-toerana misahana ny hamehana amin'ny fiarovana ny aterneto. Takiana mba hamaly ireo fitakiana rehetra avy amin’ireo manam-boninahitra ireo mpandraharaha ary mba hanaraka ireo torolalana navoakan’izy ireo momba ny fikojakojàna ireo tambajotram-pifandraisany (CD 5.2).
Rehefa handray mpiasa ho amin'ireo toerana saropady, ilain'ireo mpandraharaha ao amin’ireo sehatra ireo ny maka hevitra any amin’ireo manampahefana mpampihatra ny lalàna manontany ny momba ny lasan’ireo kandidà, manome fahefana tsy manam-petra ho an'ny polisy izany.
Mety ho ambonin’ny 500 tapitrisa MOP (Macanese Patacas – Vola ao Macao) na eo amin’ny 62 tapitrisa Dolara Amerikanina no sazy ho an’ireo mpandraharaha tsy manaraka ilay lalàna.
Fiarovana ny tontolon'ny serasera sa fanarahamaso faobe?
Nanamafy i Wong Sio Chak, Sekreteram-Piarovana, hoe tokony tsy hanara-maso ireo hetsika an-tserasera ataon'ny olona tsirairay ireo manampahefana na ihany koa hoe hanohintohina ny fahalalahana miteny izay sitrahan'ireo mponina ao Macao. Manahy mafy anefa ireo vahoaka.
Namoaka taratasy misokatra ho an’ny rehetra, ny Fikambanan’ireo Mpiasam-panjakana ao Macao (MCSA), manamafy ny ahiahiny fa hoe “tsy ara-drariny, tsy araka ny tokony ho izy (miangatra), ary tsy ara-dalàna” ny fanarahamaso sy fanenjehana ireo angon-drakitra amin’ny alalan’ilay rafitra ‘binary’.
Araka ny Andininy faha 32 ao amin’ny lalam-panorenan’I Macao, “tsy misy manampahefana miankina na tsy miankina afaka manohintohina ny fahalalahana sy ny tsiambaratelon’ny fifandraisan’ny mponina, na inona na inona antony”, raha tsy hoe noho ny filaminam-bahoaka na fanadihadihana momba ny heloka bevava izay atao sy omen’ireo manampahefana alalana.
Nanamafy ny MCSA fa “mora ovaina ho angon-drakitra mahafaoka be” ny rafitra ‘binary’ ka noho izany tokony tsy ho arahin’ireo manampahefana maso raha tsy hoe tena misy loza mitatao:
Araka ny fenitra iraisam-pirenena, tokony aorian’ny fanafihana an-tserasera ihany vao omena alalana ny fanarahamaso ny angon-drakitra toy ireny [ataon’ny manampahefana], mba hialàna amin’ny fanaparitahan'ireo fotodrafitrasa manan-daja ao an-tanàna, na ny fanarahana akaiky ny famotopotorana.
Manohana ihany koa izy fa tokony any amin’ireo mpandraharaha tsy miankina misahana ny fiarovana an-tserasera ireo fotodrafitrasa saropady ihany ny andraikitra amin’ny fanarahana maso angon-drakitra fa tsy amin’ny alalan’ny rafitra ivangongoam-pahefana.
Nokianin'ny ny “New Macau Society” koa fa amin'ny maha-henjana be azy, tsy faritan'ilay tolodalàna ny rafitra ho an’ny vahoaka mba hanara-maso sy hanoherana ny herin’ny polisy misahana ny fiarovana an-tserasera mba hisorohana ny fihetsika tafahoatra.
Mino i Jason Chao, mpikatroka ara-politika, fa vao mivoaka io, dia mety hanome alalana ny “fanarahamaso faobe” ny lalàna momba ny fiarovana an-tserasera.
Manantitrantitra i Chao fa ny famelàna ny polisy hanara-maso ireo rafitra ‘binary’ amin'ny aterineto, ny fitobahan'ny angon-drakitra, sy ny endrika fehezana angon-drakitra, dia ho ananan’ny polisy fahefana feno ny hanapaingotra ny angon-drakitry ny fifandraisana.
Mino i chao fa mety hampihena ny tombontsoan’ireo mpanao gazety amin’ny resaka fiarovana ireo loharanom-baovao ny fanitarana ny fahefan’ny polisy, amin'ny fanamafisana fa voafaritra ho anisan’ireo fotodrafitrasa manan-danja 11 ny media mpampahalala vaovao.
Amin’ny maha-tanàna iray ho an’ny mpizahatany azy, namoaka karatra SIM voaloa vola mialoha miisa 1,38 tapitrisa ho amidy eny amin’ny mpamatsy mandeha ho azy sy ireo magazay akaikin’ny mpanjifa i Macao. Noho ny fametrahana ilay lalàna fanoratana ny tena anarana, tokony hanoratra ny anarana sy ny momba azy ireo mpizahatany rehefa mividy karatra SIM. Notsindrian’I Chao fa tsy ireo mponina ao Macao ihany no iharan’ilay lalàna vaovao fa ireo mpizahatany ihany koa mazava ho azy.
Rehefa vita tanteraka ilay dingana fakàn-kevitra, hanao vakiraoka volavolan-dalàna iray ny governemanta mba ho an’ny fandalinana lalina kokoa ao amin’ny fivorian’ireo mpanao lalàna.